Ngaphambi kokuba bavukele ngokungenakuvinjwa, bukela iqembu lamarobhothi amancane adlala ibhola - BGR - Tamban RELAY
Accueil » ISAYENSI Ngaphambi kokuba bavukele ngokungenakuvinjwa, bukela iqembu lamarobhothi amancane adlala ibhola - BGR
Uma uke wazibuza ukuthi ngabe ibukeka kanjani i-apocalypse yama-robot, ungabheki njengalokho okwenzeka etshanini ngaphandle kwesakhiwo seMIT 10 kuleli sonto. Lapho, enkantolo enotshani yeKillian, bekungumbukwane ongase ube yinto evamile uma amarobhothi anobuhlakani bokuphamba esukuma egqoke amakhosi awo angabantu. kusihlwa esimbozwe ngamahlamvu ukuze sidlale ibhola elincane. Uma ungakunaki ukwesaba okukhulu esiswini sakho manje, yonke le nto iyathandeka.
Lo mcimbi we-impromptu ubhalwe kumavidiyo amaningi ezilaleli abekade ethunyelwa ku-Twitter. Kulezo ziqeshana, uzobona izimbungulu ezingamaphayiphu welula imilenze yakho, zenze umdlana futhi mhlawumbe uzoncintisana kumdlalo webhola ongakahleleki. Muhle kakhulu futhi uyesabeka kabi.
Okwenza amarobhothi abe namaqiniso kangaka kungukunyakaza kwawo kokunyakaza. Bajikeleza baphinde baphenduke futhi bagxuma ngendlela ekhombisa izilwane ezinemilenze emine, futhi bazi ukuthi laba bantu abancane yizinsimbi nemicu esikhundleni senyama nethambo likugcwalisa ngenhlanganisela elinganayo yezimanga nokumangala. ukwesaba. Kepha, bajabuleli ukubukwa.
Njengoba ukwazi ukubona kalula yiqembu elikhulu labantu abanama-kude amakhulu alawulwa kude, la amarobhothi alawulwa ngesandla. Njengabalingani babo abakhulu, la amarobhothi amancane awanabo ubuchopho bawo. Ukuthuthukiswa kwezinhlelo ezingamaqiniso zamarobhothi sekuhlukaniswe isikhathi eside nomsebenzi owenziwe kubuhlakani bokufakelwa, yize kukhulunywa ngabo njalo ekuphefumuleni okufanayo.
Amanye amarobhothi, njenge-Boston Dynamics humanoid robot Atlas, angakwazi ukuzilawula futhi enze imisebenzi eyisisekelo. Lesi yisinyathelo esikhulu esiya phambili, kepha njengalezi Mini Cheetahs, asikho lapho lapho iqembu lamarobhothi enjalo lingadedelwa enkundleni yebhola ngaphandle kokulawulwa ngokuqondile ngabantu.
Yiqiniso. Ngokuhamba kwesikhathi, amasistimu ama-robotic azoshada ne-intelligence yokufakelwa ngezindlela ezintsha nezimangazayo. Kungaleso sikhathi lapho kuzofanela sinqume ukusika intambo noma sikugcine kuvuza.